सिंह राशि छोडेर जाँदैछन् यी दुई ग्रह, अबका ७ दिन कसका लागि कस्तो ? - Everest Dainik - News from Nepal
सिंह राशि छोडेर जाँदैछन् यी दुई ग्रह, अबका ७ दिन कसका लागि कस्तो ?
आज सोमबारदेखि अर्को सोमबारसम्म बुध र शुक्र दुई राशीको अवस्थामा परिवर्तन हुन गइरहेको छ । दुबै ग्रह सिंह राशिबाट निस्केर कन्या राशीमा जाँदैछन् । यसबाट सिंह राशिमा चलिरहेका चार ग्रहको संयोग समाप्त हुने छ ।
ग्रहको यो परिवर्तनले तपाईको राशीमा के प्रभाव पर्छ त ? भारतका प्रख्यात ज्योतिषी गुजन वाष्णेयकै शब्दमा
कामको प्रशंसा हुने ।
आर्थिक लाभका लागि कुनै नयाँ कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने यो हप्ता तपाईलाई एकदमै राम्रो छ । यो सप्ताहमा कार्य व्यवसायमा सफलताको योग बनिरहेको छ । अर्को आइतबारसम्म धन लाभ तथा कार्यमा सफलता देखिन्छ । करियरमा प्रगति र लाभका दृष्टिले राम्रो छ । तपाईको कामको प्रशंसा हुनेछ । सम्मान पाइन सक्छ ।
वृष राशिः विवाद हुनसक्छ
सोमबार, मंगलबारका दिन कोहीसँग अनावश्यक विवाद हुन सक्छ । कुनै अप्रिय घटनाका कारण कष्ट पुग्न सक्छ । सोचेर बुझेर मात्रै कार्य व्यवहार गर्नुहोला । बुधबारदेखि भने प्रतिकूलतामा कमी आउला । कतै जागिर खोज्नैपर्ने आवश्यकता महसुस हुने छ । यो समयमा तपाई केही नयाँ गर्ने कोशिसमा हुनुहुन्छ । अर्को हप्ताको शुरुआतसम्म तपाईका लागि समय अनुकुल हुने छ ।
मिथुनः शनिबारपछि सुखद समय
आज र भोली कुनै प्रिय व्यक्तिसँग वार्तालाप या भेट हुन सक्छ । जीवनसाथीबाट पूरा सहयोग पाइने छ । तपाईले कोहीसँग केही वाचा गर्नुभएको थियो भने यो हप्ता त्यो पुरा गर्दा उत्तम हुन्छ । बुधबारदेखि केही कठिनाई आउन सक्ला । यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु होला । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी । मौसमी बिरामी लाग्न सक्छ । शनिबार र आइबार भने सुख समृद्धिको साधन बढने देखिन्छ । मान प्रतिष्ठामा पनि बृद्दि होला ।
कर्क राशि ः लगानीका लागि राम्रो
बिरोधीहरुको प्रभाव कम हुने छ । धन लाभको संकेट देखिन्छ । अपरिचित व्यक्तिको सहयोग पाईला । शेयर बजारमा लाभ र धनको लगानीका लागि राम्रो समय छ । शनिबार र आइतबार लामो यात्रा नगरेकी बेस । जोखिम र लापरवाहीबाट जोगिनुस । चोटपटकको सम्भावना देखिन्छ । होशियार रहनु राम्रो । दान गर्नुहोला ।
सिंह राशिः बिग्रेका काम बन्ने
महिलाहरुका लागि खासगरी छात्राका लागि राम्रो समय छ । व्यापारीलाई भने कडा परिश्रम नै गर्नुपर्ला । पारिवारिक हिसाबले यो सात दिन राम्रो छ । बिग्रेका काम बन्लान । शत्रु निर्बल रहनेछन् । कुनै बृद्धबृद्धालाई सहयोग गर्नुहोला ।
कन्या राशिः जागिरमा लाभ
सोमबार मंगलबार सामान्य मनमुटाव हुनसक्छ । पारिवारिक सम्बन्धमा अलि होश पुर्याउनु होला । काममा बिलम्ब हुन सक्छ । संयम र धैर्य नै तपाईका लागि अहिलेको मुख्य उपचार हो । बुधबारपछि भने समय ठीक छ । परिश्रम अनुसार सफलता पाइने र रोकिएका काम बन्ने छन् । व्यापार र जागिरमा लाभको योग छ । समय अनुकुल हुँदा त्यसको लाभ धैर्यतासाथ लिनुहोला ।
तुला राशिः लेनदेनमा सतर्कता आवश्यक
यो हप्ता तपाई सक्रिय मुडमा देखिनुहुनेछ । जोश उत्साह र कार्यकुशलताले काम बन्न सक्छ । बुधबार र बिहिबार भने कुनै कुराले तपाईलाई तनाव दिन सक्छ । परिवारमा यही कारण तपाईले कठोर वचन नबोल्नुहोला । अचानक कसैबाट धोका पाइन सक्छ । अर्को कुरा लेनदेनमा सतर्कता आवश्यक छ । आइतबारदेखि समय ठीक छ ।
वृश्चिक राशिः सिनियरसँग राम्रो गर्नुहोला
सोमबारदेखि बिहिबारसम्म अनुकल देखिन्छ । कतैबाट लाभ पाइन सक्छ । मान प्रतिष्ठाको पनि योग छ । तर शुक्रबारपछि भने केही समस्या देखिन्छ । शुक्रबार र आइतबारका दिन आफूभन्दा माथिका सिनियरसँग विवाद नगर्नुहोला । यो बेला आफ्नो कामसँग मात्र मतलब गरेर दायाँ बायाँ त्यति ध्यान नदिनु होला । कुनै मन्दिरमा फल दान गर्नुहोला ।
धनु राशि ः कोशिस भन्दा बढी सफलता
यो समय राम्रो छ । तपाईको आत्मविश्वास बनि रहनेछ । आनन्दित हुनुहुनेछ । नयाँ कामको शुरुआत हुन सक्छ । आर्थिक पक्ष राम्रो होला । कारोबारमा पनि ठीकै देखिन्छ । लाभदायक योजनासँग जोडिनुहुनेछ । कमाएको धनको केही रकम सामाजिक क्षेत्रमा दान गर्दा त्यो झनै राम्रो हुने छ । परिवारमा बच्चालाई समय दिनु जरुरी देखिन्छ । कुनै पुरानो कुराले मन अशान्त बन्न सक्छ, त्यसका लागि सामाजिक क्षेत्रमा समय बिताउँदा राम्रो ।
याे पनि पढ्नुस कुन राशिको कति वर्षमा भाग्योदय ?
मकरः अनावश्यक खर्चको योग
अनावश्यक खर्च हुने देखिन्छ । खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला । सही दिशा हुँदाहुँदै पनि कार्यमा बिलम्ब हुन सक्छ । काम बनेपनि कठिनाईका सामना गर्नुपर्र्ला । हप्ताको अन्त्यमा राम्रो छ । धन लाभ हुने देखिन्छ । श्रीमतीलाई कतै घुमाउन लग्दा राम्रो । पारिवारिक उलझन हटनेछ ।
कुम्भः यो हप्ता राम्रो देखिन्छ । मित्रहरुको सहयोग पाइनेछ । योजनाहरुलाई पुरा गर्न शुरुमै कस्सिनुपर्लाै । बुधबारदेखि भने केही विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । न चाहँदा नचाहँदै पनि प्रतिकुल परिस्थिति आउन सक्छ । तर जस्तो परिस्थिति आएपनि त्यसको प्रतिकार गर्नुहोला । शनिबारदेखि फेरी समय राम्रो छ ।
मीन राशिः लेन देनमा सतर्कता
यो हप्ता राम्रो छ । तपाईकै समय छ, त्यसैले यसको भरपूर फाइदा उठाउनुस । तपाईका सोझो मनको केहीले फाइदा उठाउन सक्लान त्यसैले सबै कुरा आफ्नै सोचेर नभन्नुहोला । अरु राम्रो छ । लेनदेनमा केही सतर्कता जरुरी देखिन्छ । स्वास्थ्यमा केही सतर्ककता आवश्यक छ । घर परिवारमा राम्रो होला । तपाईको परिवारमा कोही बृद्द छन् भने उनको मनोकांक्षा पुरा गर्नुहोला ।